Gobolka Jamaica ee ku dhexyaala Dalxiiska Karibiyaanka iyo dariiqa horay loogu socdo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jabinta Wararka Jamaica » Gobolka Jamaica ee ku dhexyaala Dalxiiska Karibiyaanka iyo dariiqa horay loogu socdo
Jebinta Wararka Caalamka • Jabinta Wararka Jamaica • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Hon. Edmund Bartlett wuxuu ka hadlay webinar hogaaminta JMMB. JMMB waa bangi weyn oo ku yaal Jamaica.
Bartlett wuxuu dulmar guud ka bixiyay caqabadaha haysta safarada iyo dalxiiskii Jamaica xagga fikirka adduunka.
Khudbaddan indho-furka ah waxaa halkan loogu soo guuriyay qoraal ahaan waana mid ka baxsan muuqaalka Jamaica.
Akhriso gebi ahaanba - ama dhagayso - khudbaddan muhiimada leh ee uu wasiirku kahadlay websaydhka websaydhka hogaaminta fikirka ee JMMB.
Isbeddelka warshadaha dalxiiska illaa iyo 1950-meeyadii ayaa sida ugu wanaagsan loogu tilmaami karaa inay tahay mid aan la isku halleyn karin iyada oo qaybtani ka mid tahay dhaqaalaha adduunku isla mar ahaantaana ay tusaale u tahay adkeysiga iyo u nuglaanta; iyadoo labaduba ay muujinayaan xilliyada caadiga ah ee isku midka ah.
Guud ahaan, sawirka ka soo baxay dalxiiska caalamiga dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay wuxuu ahaa mid ka mid ah koritaanka degdegga ah ee joogtada ah iyo saameynta dhaqan-dhaqaale ee fog. Soo-galootiga caalamiga ah waxay ka kaceen 25 milyan 1950-kii illaa 1.5 bilyan oo 2019, taasoo ka dhigan koror 56-jeer ah.
Maaddaama ay sii waddo inay si dhakhso leh u ballaadhiso una kala duwanaanto, saameynta dalxiiska caalamiga ah ayaa ku baahday dhammaan gobollada adduunka, waaxduna waxay ka mid tahay kuwa horseedka u ah adduunka abuurista shaqo, yareynta saboolnimada, ganacsiga dhoofinta iyo soo saarista dakhliga shisheeyaha. Shantii sano ee la soo dhaafay (pre-COVID), waaxda dalxiiska ee shaqaalaha ayaa mas'uul ka ahaa 1 ka mid ah 5tii shaqo ee la abuuray.
Sannadkii 2019, waaxdu waxay taageertay 330 milyan oo shaqo ama 1 ka mid ah 10 shaqooyin caalami ah. Sannadkii 2019, dalxiisku wuxuu kaloo US $ 8.9 tirilyan ku kordhiyay wax soosaarka guud ama 10.3% GDP; US $ 1.7 tiriliyan ee booqdayaasha soo-dhoofinta oo u dhiganta 6.8% wadarta dhoofinta; 28.3% ee adeegyada caalamiga loo dhoofiyo iyo US $ 948 bilyan oo maalgashi raasumaal ah ama 4.3% wadarta maalgashiga.
Saamaynta dhaqan-dhaqaale ee dalxiisku aad ayuu ugu kala duwan yahay gobollada oo leh dhaqaalaha yar ee aan la kala dirin ee Baasifiga, Badweynta Hindiya iyo Kariibiyaanka oo ka mid ah kuwa ugu dalxiiska badan adduunka adduunka celcelis ahaan.
Iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka Heerka Ku-tiirsanaanta Dalxiiska ee 2021 oo uu soo saaray Bangiga Horumarinta Ameerika (IADB), Caribbean-ku wuxuu kujiraa gobolka ugu dalxiiska badan dalxiiska adduunka. Index wuxuu ogaaday in ku dhowaad toban dal oo Caribbean ah oo ay ku jiraan Jamaica ayaa ka mid noqday 20ka dal ee adduunka ugu dalxiiska badan dalxiiska iyadoo daraasiin kale oo Latin America iyo Kariibiyaanka dhaqaalahoodu ay kor u dhaafayaan 100ka ugu sareeya.
Falanqeyn dheeri ah ee WTTC ee Warbixinta Saameynta Dhaqaalaha ee 2020 waxay muujisay in, xilligii dhibaatada kahor, safarka iyo dalxiiska gobolka Kariibiyaanka ay gacan ka geysteen: US $ 58.9 billion GDP (14% of GDP total); 2.8 milyan oo shaqo (oo u dhiganta 15.2% wadarta shaqada) iyo USD 35.7 bilyan oo ku baxday kharashka booqdayaasha (oo u dhiganta 20% wadarta dhoofinta).
Marka laga soo tago astaamaha in kobaca dalxiiska caalamiga uu ka sarreeyay kobaca dhaqaalaha adduunka ee 2019, saadaasha hordhaca ah waxay ahayd heer korriin dhexdhexaad ah oo 3 ilaa 4% ah sanadka 2020. Tani waxay ahayd ka hor inta uusan ku faafin adduunka ee coronavirus-ka cusub, laga bilaabo Maarso 2020, taas oo ugu dambeyn waxay qasab ka dhigtay xirida xuduudaha, joojinta duulimaadyada iyo hakinta dhamaan safarada caalamiga laga bilaabo Abriil ilaa iyo Juun 2020.